စိတ်အချဉ်ပေါက်မှုများ Archives - Page3of 12 - Saturngod
WTF!!! Where is unsubscribe link
Posted on Updated April 14, 2011 April 14, 2011 by saturngod
ရန်ကုန်မှာ အင်္ကျီဝယ်တုန်းက ကံစမ်းမဲ form လေးပေးလို့ email ပါ ထည့်ဖြည့်လိုက်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ကြော်ငြာတွေ အလကားနေရင်း ဝင်လာတယ်။ ဒါနဲ့ Filter လုပ်ထားလိုက်ရတယ်။ အဲလိုပဲ တက်ခဲ့ဘူးတဲ့ သင်တန်းတွေရဲ့ ကြော်ငြာတွေလည်း ခဏခဏ ဝင်လာတယ်။ အဲဒါတွေလည်း Filter လုပ်ရတာပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံက ပို့တဲ့ Mail တော်တော်များများက unsubscribe link မပါလာဘူး။ အဲဒါက Spam နဲ့ အတူတူပဲဗျ။ တကယ်လို့ သတင်းတွေ ပို့ချင်တယ်ဆိုရင်တောင် အနည်းဆုံး မလိုချင်တဲ့အခါမှာ Unsubscribe လုပ်ခွင့်ရသင့်တယ်။ ကြည့်ရတာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ email marketing ဆိုပြီး email ပဲ အကုန်လုံးကို To တွေ ခံပြီး ပို့တယ်နဲ့တူတယ်။ No […]
Posted on Updated January 14, 2011 January 13, 2011 by saturngod
လက် ရှိUnicode သုံးနေတာ အဆင်တော့ ပြေပါတယ်။ မပြေသေးတာက Mac font ပဲ။ လက်ရှိ Mac မှာက font က dotted circle မပါသေးဘူး။ မြင်ရတယ် ။ ဖတ်ရတယ်။ ရေးလို့ ရပေမယ့် dotted circle မပါတော့ ရေးထားတာ မှန်မမှန် မသိ။ ဒါနဲ့ စာရေးဖို့လုပ်တိုင်း ရေးထုံး order ကို ပြန်ပြန်စဉ်းစားနေရတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့် လို့မျိုး စာလုံးမှာ အရင်ကတည်းက ရေးလာတာ ယ–်–့ ပါ။ အခု Unicode 5.2 မှာမှ –့ –် ဖြစ်သွားရပြန်တယ်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက လက်နဲ့ ရေးလာတာကလည်း ယ–်–့ ပါပဲ။ ကိုယ့်ဘာသာ […]
Posted on Updated December 12, 2010 December 12, 2010 by saturngod
အခုတော့ infinity Blade ဆော့တာ အကုန်ပြီးပြီ။ Achievements ကတော့ ၃၈ ခု ပဲရှိသေးတယ်။ နောက်ထပ် ၄ ခုလောက် ရရင်တော့ ပြည့်ပြီ။ သို့ပေမယ့်လည်း မဆော့ချင်တော့ဘူး။ အခု All master ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် ထပ်ပြီး level တက်စရာ မရှိတော့သလို God King နဲ့ ချရင်လည်း လွယ်လင့် တကူနိုင်နေပြီ။ အဲ… အဆိပ်မမိသွားရင်ပေါ့။ God King နဲ့ ချတဲ့အခါမှာ ဓားစာ တချက်မိသွားရင် အဆိပ်မိသွားတတ်တယ်။ Heal ပြန်မလုပ်နိုင်ရင် သေပြီပဲ။ အဲဒါ တော်တော်ဆိုးတယ်။ တနည်းပြောရင် ညစ်ထားတာပေါ့ဗျာ။ ဆော့ရင်းနဲ့ ဂရုပြုမိလာတာက Infinity Blade company က တော်တော် ညစ်ထားတာပဲ။ […]
Posted on Updated November 22, 2010 November 22, 2010 by saturngod
iBell သံနှင့် မနက်မိုးလင်း iBus stop မှာ iPeople များ… iphone များနှင့် အလုပ်ရှုပ်နေ… iMRT ဝယ် iPhone များနှင့် ကလိကလိ… iPad များနှင့် iBook ကြီးကို ဖတ်နေကြပြန်… iOffice မှာ iApp များ ရေးရပြန်သည်… iApp အကြောင်း ဆွေးနွေးပြန်သည်… iOS အသစ်အကြောင်း ပြောကြပြန်၏…
Do not upgrade Ornagai 1.4
Posted on Updated August 18, 2010 by saturngod
Ornagai 1.4 ကို upgrade မလုပ်နဲ့အုံးဗျ။ ကျွန်တော် iPodTouch ကို jailbreak လုပ်လိုက်တာ မှားသွားတယ်ဗျာ။ မြန်မာ font embed ကို စမ်းမရပဲ simulator မှာ ပေါ်တာနဲ့ တင်လိုက်တာ။ အခု jailbreak မဟုတ်တဲ့ device တွေမှာ မပေါ်ဘူးဆိုလို့ ပြန်စမ်းကြည့်မှ error တွေ့တယ်။ sorry ဗျာ။ ဒီည Ornagai 1.4.1 ကို တင်ပေးပါ့မယ်။ အခုတော့ ကျွန်တော့် device ကို restore လုပ်ထားတယ်။ iPhone simulator က မယုံရတော့ဘူး =(
time to change ve ?
Posted on Updated August 10, 2010 August 10, 2010 by saturngod
မနေ့က MZ 2.0 ကို server မှာ တင်တော့ view တွေ ပါနေတော့ မရဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ဒါနဲ့ MT ကို မေးရတယ်။ ၁ ရက်ကျော်ကျော်လောက် စောင့်လိုက်မှပဲ ပြန်ဖြေတယ်။ gs က view ဆောက်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့။ dv ဝယ်ပါတဲ့။ dv တော့ မဝယ်နိုင်သေးဘူး။ ve ဆို၇င်ကော ရမလား မေးထားအုံး။ eee…. server ဖိုးက ကုန်အုံးမယ်။ iPad ကြောင့် ပိုက်ပိုက် တွေ ခမ်းသွားတာ။ server ထပ်ဝယ်ရအုံးမယ်ဆိုရင်တော့ =( VE က ဈေးများတယ်ဗျ။ တနှစ်ကို $300 တောင် ဆိုတော့ ကျွန်တော့်အတွက် နည်းတာမဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုရမလိုပဲ။ ဟူး…. Django ပါရရင်တော့ VE ကို ပြောင်းဖို့ များပါတယ်။ ဒီလ တော့ MZ 2.0 တင်လို့တော့ မရလောက်သေးဘူး။ […]
Posted on Updated August 7, 2010 by saturngod
ရာဇသြင်္ကန် မဲဇာ ပို့ခံထိတဲ့ အကြောင်းကို ငယ်ငယ်တုန်းက ကျွန်တော်တို့တွေ သင်ခဲ့ရတယ်။ နရပတေ့ကို မင်းတင်ခဲ့ပြီး ချီးမြှင့်မြှောက်စားခြင်း မခံရတော့ “ပန်းပွတ်သည် သားမြေးတွေ ကောင်းစားနေသောကြောင့်” ဆိုပြီး နရပတေ့ မင်း ကို ခနဲ့ ခဲ့တယ် ။ အဲဒါကြောင့်ပဲ မဲဇာ ပို့ခံထိတာပေါ့။ သို့ပေမယ့် မဲဇာရောက်တော့ ပန်းပြားပင်ကဲ့သို့ လေယူရာ မယိုင်းခဲ့လေခြင်း ဟု ဆိုခဲ့လေတယ်။
Posted on Updated August 3, 2010 by saturngod
FAQ မှာလည်း ရေးထားပြီးပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ခဏခဏ မေးနေလို့ post တစ်ခုအနေနဲ့ တင်လိုက်တာပါ။ အဖြေကတော့